आरक्षण कसलाई ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
वैशाख १४, २०७५ मेखराज परियार
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०७:५५
जोखिमपूर्ण शासन पद्धति
मंसिर २८, २०७४ मेखराज परियार
विश्वकै कान्छो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा प्रवश गरेको मुुलुक नेपाल बहुल जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, संस्कार, मूल्य र मान्यता भएको देश हो । गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, अशिक्षा, मतभेद, रुढीवाद, अविकासबाट आक्रान्त हाम्रो मुुलुकमा भाषण र आश्वासनको राजनीति निकै फस्टाएको देखिन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्र (हालको व्यवस्था) बाहेक पनि विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) र मिश्रित प्रणाली पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संविधानमा ‘संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ लेखिए तापनि हाम्रो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त होला भन्ने बहस उठ्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेका छ । विशेषत: नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा दृढ देखिएको थियो । नेकपा एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै आएको भए तापनि संविधान निर्माणताका संसदीय व्यवस्थामा पूर्णत: सहमति जनायो । स्मरण रहोस्, माओवादी केन्द्रले भने संविधान घोषणाकै क्रममा संसदीय व्यवस्थालाई फरक मतसहित समर्थन गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस भने विगतदेखि नै संसदीय प्रणालीमा अविचलित छ । हुन त कुनै पनि शासन व्यवस्था दोषरहित छैन । गुण र दोष सबै व्यवस्थामा हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामात्रै लोकतन्त्र होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी या मिश्रित (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई बराबर अधिकार दिइने व्यवस्था) पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हुन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै अंँगाले पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले अधिकारको दुरुपयोग नगर्ने हो भने व्यवस्था सफल हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा पनि स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति प्राप्त भएकै विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तथापि हाम्रो देशमा भने नेताहरूको पद, सत्ता स्वार्थ, लोभमा सरकार अस्थिर बनाउने तर दोषचाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई दिने विडम्बना देखियो । ‘संसदीय खेलमा जे पनि जायज’ भन्ने मान्यता गलत छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने मान्यता बदल्दै ‘चुनावले चुनावद्वारा चुनावका लागि’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन हाम्रा प्रमुख पार्टी र प्रमुख नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगे । दलबल, पैसा, पहुँच, गुन्डा, भ्रम, डर, प्रयोग गरेर जसरी भए पनि जित्नैपर्ने चुनावी लोकतन्त्र बलियो हुँदै हुँदैन । जनताको निष्पक्ष, स्वतन्त्र मत लोकतन्त्रको प्राण हो ।
जनअधिकार कुण्ठित हुने डर
एक वर्षमा दुइटा सरकार फेरिने, एक दल सरकारमा जानकै निम्ति गठबन्धन बदल्ने, पार्टी फुटाउने, नैतिक/अनैतिक साँठगाँठ निर्माण गरी अस्थिरता निम्त्याउने घृणित क्रियाकलापदेखि जनता विक्षिप्त छन् । त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए स्थायित्व हुने दलहरूको घोषणाले भ्रम सिर्जना गरेको हो । साँच्चै यो अस्थिरता, पदलोलुपता, अविकास, गतिहीनता संसदीय व्यवस्थाकै करणले गर्दा भएको हो कि भन्ने जनतामा पर्नु स्वाभाविकै हो । एक जनालाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने र ५ वर्ष स्थायी सरकार बन्ने र त्यस सरकारले उन्नति र समृद्धि ल्याउने भ्रम फिंँजाइएको छ । स्थायित्व मात्रै
समृद्धिको आधार हो कि होइन ? हाम्रै देशमा पनि राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा स्थायित्व थियो । किन विकास र समृद्धि हुन सकेन ? दल बढी भएर, प्रतिनिधि पृथक समुदायका भएर समृद्धि नभएको हुँदै होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधर यस्तो व्यवस्थाले स्थायित्व दिने र मुुलुकको कायापलट हुने तर्क गर्छन् । पहिले त स्थायित्व प्राप्त गर्ने आधार के–के छन् भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायित्व शासन पद्धतिको कमजोरीको कारणले नभई पार्टी नेतृत्वको सत्तालोभी, भ्रष्ट विवेकको कारणले गर्दा भएको हो । आफै सम्मिलित सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव व्यस्थापिकामा पेस गरी सरकार विघटन गराउने र आफै सत्ताको नेतृत्व गर्ने हिजोको व्यवहार भुलेर स्थायित्वको निम्ति गोहीको आँसु बगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदासमेत आफू पदमा पुग्न, आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार ढलाउने विडम्बन भएका थिए । लज्जास्पद, घृणित र अनैतिक कार्यमा संलग्न नेतृत्वले स्थायित्वको बखान गरेको सुहाउँदैन ।
दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको व्यवस्थामा संसद्भन्दा पनि निर्वाचित पद प्रमुख हुन्छ । जसरी संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार) संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । व्यवस्थापिकामा जनताका पीरमर्का, अधिकार, ऐन, कानुन निर्माणको सन्दर्भमा छलफल हुन्छ । संसद् सदस्यले जनताका जनजीविका, हकबारे संसद् बैठकमा आफ्नो विषय राख्न पाउँछ । यदि सरकार जनउत्तरदायी, अग्रगामी जनसरोकारमा सक्रिय हुनसकेन भने सरकार प्रमुख या कुनै विभागीय मन्त्रीको हेरफेर हुनसक्छ । असक्षम सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई संवैधानिक समयअघि नै हटाउन, नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन । एक व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चल्छ । संसद्को अधिकार स्वत: कमजोर रहने हुँदा निरंकुश नेतृत्व स्थापित हुनसक्छ । जनताका अधिकार कुण्ठित गरी खोजिने स्थायित्वले कसरी समृद्धि ल्याउन सम्भव होला ?
समावेशी नेतृत्व असम्भव
लोकतन्त्रको मुख्य आधार समानुपातिक समावेशीकरण हो । हाम्रो जस्तो बहुजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, संस्कार र भाषा भएको देशमा कमजोर वर्ग, उत्पीडित समुदाय, बञ्चित वर्गको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन सक्ने सम्भावना छैन । दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदाय, मजदुर, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्ने कल्पना गर्न कठिन छ । के फरक–फरक निर्वाचनमा भिन्न समुदाय, जातजाति, लिङ्गका प्रत्यक्ष निवाचित कार्यकारी निर्वाचित गराउनैपर्ने प्रावधान संविधानमा नै स्पष्ट गर्न सकिछ ? एक पटक खस–आर्य समुदाय निर्वाचित भए अर्कोपटक जनजाति, अर्कोपटक दलित, अर्कोपटक मुस्लिम ? त्यस्तै लिङ्गमा नदोहोरिने व्यवस्था गर्न हामी तयार छौं ? यस्तो सम्भव होला भन्ने लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने एक जात सदाका लागि शासक बनाइरहने ? यस्तो व्यवस्थाले त मुलुक नयाँ जातीय द्वन्द्व र घृणामा फँस्ने निश्चित छ ।
प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतृत्व वर्गको सूची तयार गर्ने हो भने बाहुन, क्षत्रीमात्रै अघि आउँछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा इत्यादि । त्यति मात्रै होइन, संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न पुगेका पार्टीका नेतृत्वमा समेत सोही जाति र पुरुष नै छन् । दलित, उत्पीडित, जनजाति, सिमान्तकृत जातजाति, महिला, तेस्रो लिङ्गी, अहिन्दु समुदायका व्यक्ति प्रथम पंक्तिको नेतृत्वमा छैनन् । दशकौं एउटै जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायको असमावेशी नेतृत्व निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकको निम्ति जायज हुँदैन ।
प्रथम राष्ट्रपति मधेसी, दोस्रो महिला, उपराष्ट्रपति पहिलो मधेसी र दोस्रो जनजाति निर्वाचित गरेर हाम्रै संसदीय व्यवस्थामा एउटा राम्रो उदाहरणको सुरुवात भएको छ । यस्तो आफ्नै राम्रो विगतबाट पाठ सिक्दै अझै उत्पीडित वर्ग, कमजोर समुदायलाई समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) पदमा समेत अहिलेजस्तो एकल खस–आर्य नेतृत्वको क्रमभंगता तोड्दै अन्य वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायमा कसरी पहुँच पुर्‍याउने यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । महिला प्रधामन्त्री, दलित, जनजातिको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था हो भने प्रत्यक्षतर्फकै सिट संख्या बढाउने र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गजस्ता कमजोर समुदायलाई आरक्षित सिटमार्फत निर्वाचित गराउन सकिन्छ । दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गराउने आरक्षण व्यवस्था छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सफल भएको छ । यस्तो गर्दा समानुपातक निर्वाचनतर्फ नेताका आफन्त, श्रीमती, साली, नातागोता, आदेश मान्ने असक्षम नै छानिने अवस्थाको अन्त्य हुनपुग्छ । कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने उत्तम विकल्प हो यो ।
मुलुक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमण काल, अशान्ति, त्रास, भय, विध्वंसको चरण पार गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा भरखर बामे सर्न थालेको छ । प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तै संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्नु सबैको प्रमुख दायित्व हो । संवैधनिक हक प्राप्त गरेका र प्राप्त भएका जनउपलब्धिको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जनताको समानता, न्याय, शान्ति, विकास, स्थायित्व र समृद्धि यसै संविधानको कार्यान्वयनपश्चात प्राप्त हुनेछ । आवश्यक संशोधन गर्दै यसै संसदीय लोकतन्त्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । संसद्लाई समावेशी, जनमुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकले तय गरिसकेको मार्गबाट अब अन्य बाटो खोज्नु, सपनाको घर सजाउनु किमार्थ जायज होइन । स्थायित्व यसै व्यवस्थामा सम्भव छ । समानता र समानुपातिक समावेशीकरणले जातीय, लैंगिक, वर्गीय, समुदायगत द्वन्द्व र घृणालाई पखाल्दै अघि बढ्न सघाउ पुर्‍याउँछ । शासन व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । साधनको सही प्रयोग गर्नसके मात्रै सफलता मिल्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणाली हाम्रो देशको सन्दर्भमा व्यावहारिक र जोखिपूर्ण हुने स्पष्ट देखिन्छ ।